Jaaliyada Digil & Mirifle ee Dalka Australia oo Baaq ka soo saartey Dagaalada Gobolka Shabeelaha Hoose + Sawiro – idalenews.com
Kulan Balaaran oo ay isugu yimaadeen wargaradka, culimaadudiinka, gacansatada, dhalinyarada iyo haweenka ka soo jeeda beelaha Digil iyo Mirifle ee ku dhaqan magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa laga soo saarey baaq iyo talo soo jeedin ku saabsan dagaalada soo noqnoqday ee ka socda gobaolka Shabeelaha Hoose.
Shirka ayaa ugu horeyn waxay ka qeyb galayaashu si kulul ugu doodeen asalka dagaalka haatan ka socda gobolka Shabeelaha Hoose & sida ugu haboon ee loo joogin karo dagaalada joogtada ee gobolka ku soo noqnoqday isla markaasna wax looga qaban lahaa cadaalad darada baahsan ee ay tabanayaan dadka ka soo jeeda deegaanada gobolka Shabeelaha Hoose. Waxayna sidoo kale Jaaliyada Digil iyo Mirifle si kulul u cambaareeyeen goodinta dagaal ee ka soo yeeraysaa masuuliyiinta ku lugta leh iclaaminta dagaal hor leh oo lagu qaado dadka deegaanka gobolka Shabeelaha Hoose.
Dood iyo falanqeyn dheer ka dib waxay waxgaradka shirka ku taliyeen qodobadaan soo socda si loo helo xasilooni waarta iyo horumar dadku deegaankaasi higsadaan:
In dowladda Soomaaliya ka dayso dulmiga iyo dhibaatooyinka (Dilka, boobka, dhaca, gumaadka, kufsiga, xasilooni darada, iwm) dadka u dhashay degaanka Shabeelada Hoose, iyadoo loo adeegsanayo ciidamada dowlada oo ka soo jeedaan beelaha Hawiye.
In dowladda Soomaaliya si deg-deg ugu saarto ciidan beeleedka ku sugan gobolka Shabeelada Hoose, laguna bedelo ciidamo ka soo jeeda dadka deegaanka ama kuwo isku dhaf.
In dowladda Soomaaliya talaabo deg-deg ah ka qaado kana saarto dadka u dhashay beesha Hawiye oo xooga iyo xaaraanta ku haysata hantidada qaranka ee gobolka Shabeelaha Hoose, iyo dadwaynaha sida beeraha, guryaha iwm, laguna wareejiyo dadkii lahaa oo u dhashay gobolka.
In la soo afjaro dagaalada soo noq-noqanayo oo dhib badan u geestay dadka ku nool gobolkaasi.
In maamulka gobolka iyo degmooyinka Shabeelada Hoose loo daayo dadka u dhashay gobolka si aayahooda ugu tashtaan.
In Xildhibaanada Baarlamaanka Somaaliya talaabo cad oo deg-deg ka qaadaan sidii wax loogu qaban lahaa dhibaatooyinka ka jira gobolkaas.
In caalamka la gaarsiyo dhibaatooyinka lagu hayo bulshao-waynta ku nool gobolka Shabeelada Hoose, Soomaaliya.
In warbaahinta aduunka la gaarsiyo dhibaatooyinka lagu hayo dadwaynaha u dhashay gobolka Shabeelada Hoose, Soomaaliya.
Jaaliyada Digil & Mirifle ee Magaalada Melbourne ee Dalka Australia.
Madaxweyne Obama ayaa aqalka cad ee looga arimiyo dalka Mareykanka afur ugu sameeyey Muslimiinta